Samsun’da Toplu Ulaşıma Zam | RayHaber | မီးရထားလမ်း အဝေးပြေး | ကေဘယ်လ်ကား
[22 / 11 / 2019] Baskentray စခန်းများနှင့်အချိန်ဇယား	06 တူရကီ
15 / 10 / 2019 Levent Elmastaş 55 Samsun, ရထားလမ်း, အထွေထွေ, ပင်လယ်နက်ကမ်းခြေ, မြို့ပြရထားစနစ်များ, ခေါင်းစီးသတင်း, တူရကီ, ဓါတ်ရထား 1
31 မတ်လနောက်ပိုင်းတွင်ရေသို့ 25 နှင့်စာဖတ်နှုန်းသည် 15 မြင့်တက်လာသည်။ ဆမ်ဆန်မက်ထရိုပိုလီတန်မြူနီစီပယ်ကဤအချိန်တွင်သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးစရိတ်တိုးမြှင့်ပေးရန်ဆုံးဖြတ်ခဲ့သည်။ ထို့ကြောင့်3TL မှ 3.5 TL သို့၊4TL မှ 4.5 TL သို့ဘတ်စ်ကားနှင့်လမ်းရထားခများမှအသေးစားဘတ်စ်ကားများကျသင့်သည်။ စားသုံးသူကာကွယ်စောင့်ရှောက်ရေးအသင်း (TÜKODER) ဆမ်ဆန်ဘဏ်ခွဲဥက္ကS္ဌ Sema Onar Burned 18'lik ရာခိုင်နှုန်းကမြှင့်တင်ရန်တုံ့ပြန်ခဲ့သည်။ သူက "ဝင်ငွေနည်းလူတစ် ဦး ဘာလုပ်သင့်သလဲ လူသိပ်မများဘူး။ လုံလောက် ဒါကမသမာပဲ
SözcüIsmail Akduman'ınသတင်းအရ၊ “ Samun မြို့ပြမြူနီစီပယ်၊ 25 ရာခိုင်နှုန်းဟာရွေးကောက်ပွဲပြီးတဲ့နောက်သောက်ရေရဲ့ရာခိုင်နှုန်းပဲ။ CPI CPI နှုန်းတိုးလာတာကြောင့်မီတာစာဖတ်နှုန်းကမြင့်တက်လာတယ်။ ထို့ကြောင့်မြို့လယ်ခေါင်တွင်ဘတ်စ်ကားခများ၊ 15 တစ်ပြား၊ ဘတ်စ်ကားနှင့်လမ်းရထားလက်မှတ်များမှာလည်း 50 ရာခိုင်နှုန်းဖြင့်မြင့်တက်ခဲ့သည်။ ထို့ကြောင့်dolmuş 18 ပေါင်3ပေါင်3တစ်ပြား၊ ဘတ်စ်ကားများနှင့်တွန်းလှည်းခများ 50 ပေါင်4TL ကိုဖယ်ရှားခဲ့သည်။ UKOME တွင်ဆုံးဖြတ်ချက်ကိုတစ်ရက်အတွင်း 4.50 လက်မှတ်ထိုးပြီးနောက်အကျိုးသက်ရောက်လိမ့်မည်။
Samsun TUKODER ဆမ်ဆန်ဌာနခွဲဥက္ကChairman္ဌ Sema Onar ကအခြားသောပြည်နယ်များထက်ဘ ၀ သည်ပိုမိုခက်ခဲကြောင်းပြောကြားခဲ့သည်။ “ စည်ပင်သာယာကစည်ပင်သာယာမတိုင်မီကရေကို 25 မြင့်တက်ခဲ့တယ်။ နိုင်ငံသားသည်တောင်တက်ခြင်း၏သားကောင်ဖြစ်သော်လည်းသယ်ယူပို့ဆောင်ရေးကိုယခုလုပ်ဆောင်နေသည်။ နိုင်ငံသား၏လစဉ်သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးဥပဒေကြမ်း 270 ပေါင်။ ဒါကမောင်းသူမဲ့ဖြစ်ပါတယ် မဖြောင့်ပါနဲ့ စျေးအကြီးဆုံးသယ်ယူပို့ဆောင်ရေးကဆမ်ဆန်မှာရှိတယ်။
EM နှစ်ခုလုံးအားကစား SPORTS
Yakti ကနိုင်ငံသားသည် dolmus၊ bus သို့မဟုတ် tram တို့ကိုမစီးနိုင်တော့ဘဲ“ ငါတို့နိုင်ငံသားတွေဟာစက်ဘီးနဲ့သွားတဲ့နေရာတွေကိုသွားကြလိမ့်မယ်။ သူတို့ကအားကစားလုပ်တယ်။
အများပြည်သူသယ်ယူပို့ဆောင်ရေးအပေါ် Samsun အတွက်အားလပ်ရက် Paid!
ဒါဟာ Konya အများပြည်သူသယ်ယူပို့ဆောင်ရေးတိုးမြှင့်တွင်ကျင်းပခဲ့သည်!
အချိန်ပြည်သူ့သယ်ယူပို့ဆောင်ရေး Izmir 10 ရာခိုင်နှုန်းအတွက်ဆိုက်ရောက်
Izmir ရှိအများပြည်သူသယ်ယူပို့ဆောင်ရေးတွင် 10 ရာခိုင်နှုန်းတိုးလာခြင်း…
Samsun otobüs bilet fiyatları
Vural Sevinç ဟုသူကဆိုသည်: